Boeny : nanaovana fivoriana manokana ny halatr’omby | NewsMada
Boeny : nanaovana fivoriana manokana ny halatr’omby
Nanao fivoriana, ny 29 janoary teo, ny tompon’andraiki-panjakana samihafa, ao amin’ny faritra Boeny ho fanatsarana ny fomba fiasa ao anatin’ny làlam-pihariana omby. Nambara tamin’izany fa tokony hihena hatrany amin’ny 80% ny halatr’omby hatramin’ny volana marsa raha toa ka arahina an-tsakany sy an-davany ny toro-marika rehetra avy ao amin’ity fihaonana ity.
Teo no nanentanan’ny lehiben’ny faritra Boeny, Saïd Ahamad Jaffar, ny mpandray anjara, ny lehiben’ny distrika, lehiben’ny boriborintany, kaomandin’ny zandary sy ny mpitsabo biby mba hanaja ny lalàna velona amin’ny fakana hetra mifehy ny fivarotana omby araka ny lalàna 024-2013 ao amin’ny faritra. Marihina fa notovonana izy io tamin’ny 2014 noho ny fiakaran’ny vidin’ny bokin’omby (Fib). Lasa avo roa heny, 32.500 Ar ny Fib 50 pejy.
Kara-panondron’omby ny Fib manan-kery dimy taona. Koa raha tsy maty ilay biby, mila misolo ny Fib rehefa dila io fe-potoana io. Mandoa 2.800 Ar isaky ny omby ny tompon’omby; 476 Ar ho an’ny boriborintany ; 674 Ar ho an’ny kaominina ary misy 870 Ar ho an’ny faritra. Ny tambin-karaman’ny zandary manara-maso ny tsenan’omby kosa, 2.500 Ar isaky ny omby. Afaka maka ny anjarany isaky ny omby lafo ny sefo fokontany misy ny tsenan’omby ho fikojakojana ny tsena.
Olana hafa : tsy ampy ny omby
Tsy eo amin’izay lafiny Fib sy ny fanaraha-maso ny tsena izay ihany anefa ny vahaolana. Ny tena olana, tsy ampy intsony ny omby manerana ny Nosy, tsy maharaka ny tinady ny tolotra, indrindra ho an’ny tsena eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, mila omby 400 isan’andro. Ny avy any Ambalavao sy Tsiroanomandidy tsy maharaka intsony. Na izany aza, nanome toky ireo mpandraharaha omby any Ihosy hamatsy ny tsena eto Antananarivo, nandritra ny fandalovan’ny minisitry ny Fiompiana tany an-toerana ny volana janoary teo.
Nanatrika ny fotoam-pivoriana ny lehiben’ny fampanoavana ao amin’ny Fitsarana Ambony, lefitry ny faritany miaramila faha-4, lefitry ny kaomandin’ny zandary ary ireo tale iraisam-paritry ny polisim-pirenena, samy avo ao Mahajanga avokoa.